Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်၌ COVID-19 ရောဂါ ပြည်တွင်း ကူးစက်မှု လူနာသစ် နှစ်ဦးတွေ့ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် ရွှေလီမြို့တွင် မြောင်လူမှုအသိုက်အဝန်းအား COVID-19 ရောဂါအတွက် nucleic အက်စစ် စစ်ဆေးပေးသည့် နေရာတစ်ခု၌ ကျန်းမာရေးလုပ်သားတစ်ဦးက ဧပြီ ၆ ရက်တွင် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းနေစဉ်(ဆင်ဟွာ) CHINA
အဆိုပါ လူနာသစ်နှစ်ဦးစလုံးမှာ နယ်စပ်မြို့ဖြစ်သည့် ရွှေလီမြို့၌ ပြုလုပ်သည့် မြို့လုံးကျွတ် nucleic acid စစ်ဆေးမှုအတွင်း ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကော်မရှင်က ဆိုသည်။
ယူနန်ပြည်နယ်တွင် ဧပြီ ၆ ရက်အထိ အတည်ပြုလူနာ ၆၈ ဦး နှင့် လက္ခဏာမပြ လူနာ ၄၆ ဦး တို့ကို ဆေးဝါးကုသပေးလျက်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ သတ်မှတ်ဆေးရုံများတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်မှုအောက်တွင် ထားရှိခြင်းများ ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
KUNMING, April7(Xinhua) -- Southwest China's Yunnan Province reported two new locally transmitted COVID-19 cases on Tuesday, the provincial health commission said on Wednesday.
Both the cases were found in the border city of Ruili duringacitywide nucleic acid testing campaign, the commission said.
As of Tuesday, 68 confirmed cases and 46 asymptomatic cases are receiving treatment or under medical observation in designated hospitals in the province
A medical worker disinfects the sample collecting area inasite of nucleic acid testing for COVID-19 at Munao community, Ruili City, southwest China's Yunnan Province, April 6, 2021. (Xinhua/Chen Xinbo)
Previous Article လက်ဘနွန်နိုင်ငံသို့ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေး အသုတ်နှစ်သုတ် ရောက်ရှိ
Next Article တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးသူ စုစုပေါင်း (၃.၂၃)သန်းရှိ